ပါရီရန်လန်ဒန် 2:20 Eurostar ရထားဖြင့်နာရီ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ပါရီရန်လန်ဒန် 2:20 Eurostar ရထားဖြင့်နာရီ
စာဖတ်ချိန်: 10 မိနစ်များ
လန်ဒန်နှင့်ပဲရစ်အကြားခရီးသွားလာရန်အအသုံးအများဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေတ Eurostar မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်, နှစ်ခုမြို့တော်ဆက်သွယ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထား. အဆိုပါ-hop အောင်ရှာဖွေနေခရီးသွားများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, အဆိုပါ Eurostar မြန်နှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတွေထဲကဖြစ်နေဆဲ, ပေးရ, နှင့်လွယ်ကူခြင်း. အဆိုပါရထားရေအောက်ရုပ်သံလိုင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားသာချက်ယူ, သို့မဟုတ် “chunnel,” သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှအလျင်အမြန်သငျသညျအရနိုင်ရန်အတွက်အင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်အကြားတည်ဆောက်ထား.
အောက်တွင်, သင်ပဲရစ် Eurostar ခရီးရန်သင့်လန်ဒန်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးအသေးစိတ်ရှာတှေ့နိုငျ.
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုဖောက်သည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ဥရောပတွင်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ကျနော်တို့စတင်ခင်မှာ, ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားခရီးသွားမှတဆင့်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်အတိအကျဘာကြောင့်မယ့်ကိန်းဂဏန်းထွက်ပါစေ- နောက်ဆုံးတော့, ဒီတိုက်ကြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလနေထိုင်ရာထားပြီး, အရာသည်၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံမကြာခဏအလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြား Modes သာလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မီးရထားခရီးသွားလာ၏ခမ်းနားသှေးဆောငျအတှကျကဆိုပါတယ်ခံရဖို့တစ်ခုခုရှိမယ့်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးအချိန်ခရီးသွားများအတွက်များအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်, သူမထွက်ခွာမီလေးတွင်ခုန်ရန်ရထားဇယား၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သည်. ဤသည်ဥရောပရဲ့လေဆိပ်မှနက်ရှိုင်းသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, ထွက်ခွာရှေ့၌သင်တို့နိမ့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်အနည်းဆုံးနှစ်နာရီသည်အဘယ်မှာရှိ, သင်လေဆိပ်တည်နေရာခရီးသည်အပိုဆောင်းအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်း.
ခရီးသွားအချိန်စကားပြောသော, ဥရောပက၎င်း၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများအတွက်ကောင်းစွာ-လူသိများသည်, ဝေးက၎င်း၏အကွေ့အကောက်များသောကားလမ်းနှင့်အဆင်မပြေတည်ရှိပြီးလေဆိပ်တစတစအရာ. တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးရထားမြန်ဆန်မကြာခဏတိုက်ရိုက်များမှာ, အရာရှာဖွေစူးစမ်းလျော့နည်းအချိန်ခရီးသည်နှင့်ပိုပြီးအချိန်ကိုဆိုလိုတယ်.
ဘရပ်ဆဲလ် Eurostar ရထားမှလန်ဒန်
လန်ဒန်ပဲရစ် Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ် Eurostar ရထားမှ
တစ်ဦးက Eurostar ရထားတွင်သင့်လက်မှတ် booking
ရထားကိုလေယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ Eurostar သည်မြို့လယ်မှမြို့လယ်သို့သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ကဲ့သို့သောဝေးလံသောလေဆိပ်မတူဘဲ လန်ဒန် Heathrow နှင့်ပဲရစ်ချားလ်စ် De Gaulle, သင့်ရဲ့ရထားလန်ဒန် St-Pancras အင်တာနေရှင်နယ်ကနေထွက်ခွာနှင့် Gare ဒူ Nord ရောက်ရှိ, သင်အလွယ်တကူမြို့တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများအားလုံးကိုလမ်းလျှောက်နိုင်သောနေရာ.
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အားလုံး Eurostar လက်မှတ်တွေ၏အနည်းဆုံးနှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည် ဝန်စည် နှင့်လက်အိတ်. သငျသညျအိတ်တွေအများကြီးယူလာနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်လည်းသင်၏အပိုပြီးအိတ်ရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုမယ့်မြင့်မားတဲ့လူတန်းစားလက်မှတ်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်. မတူတာကတော့, ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းကသူတို့ကနဦးကြိုတင်စာရင်းသွင်းဘို့လျော့နည်းအခကြေးငွေကောက်ခံစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အိတ်အခကြေးငွေနှင့်ထိုင်ခုံရွေးချယ်မှုစွဲချက်လျင်မြန်စွာတက် add.
ဒီလမ်းခရီးဘို့လက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုအများကြီးသာအတက်အကျလေ့, မကြာမီသင်နေနိုင်ကြသကဲ့သို့လက်မှတ်များဝယ်ယူအကြံပြုကျနော်တို့ဒါ. ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဤအလက်မှတ်တွေကြိုတင်သုံးလရောင်းချမှုအပေါ်သွားပါ, ရာသီပေါ် မူတည်. သော်လည်းသင်တို့သည်လည်းကြိုတင်ခြောက်လမှသူတို့ကိုတက်ရှာတှေ့နိုငျ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးအကြံပြု သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေရှာပြီးစာအုပ်ဆိုင်က်ဘ်ဆိုက်, အရာအလိုအလြောကျသငျသညျဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းစျေးနှုန်းအရအားလုံးရရှိနိုင်စာရင်းရှာဖွေ, အာမခံ.
လန်ဒန် Antwerp Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန် Strasbourg Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန်ရော့တာဒမ် Eurostar ရထားမှ
အဆိုပါ Eurostar ရထားသုံး-class ကို cabin လည်ပတ်, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်. သူတို့အဘို့ရိုးရှင်းစွာတယောက်ကိုတယောက်အရပျမှရရန်ရှာဖွေနေ, ဒုတိယလူတန်းစားလက်မှတ်တွေသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားအပေါ်သူများသည်အစားနျ Standard ပရီးမီးယားလိဂ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးပရီးမီးယားလိဂ်လက်မှတ်ပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, သင်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနည်းပြ၌ထိုင်နှင့်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအစာစားပေးခွင့်ပြုပါနှစ်ဦးစလုံး၏, ဒါကြောင့်လန်ဒန်ကပဲရစ်ရထားလက်မှတ်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာခွင့်ရတယ်:
ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်အဖြစ်, ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ကွဲပြားမှုများသင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲများအရသိရသည်, ရရှိနိုင်မှုဖွင့်လှစ်တစ်ချိန်ကသင်စာအုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်. သင်ကြိုတင်ဝေးလုံလောက်စွာစာအုပ်ဆိုင်လျှင်, သငျသညျအကွောငျးကိုလစာမှရှာနေပါလိမ့်မယ် 55 ဒေါ်လာတလမ်း, သို့မဟုတ် 90 ဒေါ်လာအသွားအပြန်. ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေစျေးနှုန်းများကောင်းကင်ပြာမြင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးအကြာတွင်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဝယ်ဖို့နှစ်ဆနှင့်အတူ. ဤသည်အသွားအပြန်နဲ့ One-လမ်းလက်မှတ်တွေနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမှန်.
အဆိုပါ Eurostar တစ်ရထားလမ်း pass ကိုင်ထားသောသူအပေါင်းတို့မှမရရှိနိုင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဒါဟာထိုက်တန်, ဒါကြောင့်သင်ဤခရီးတစ်ခုဖြားယောင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့စေလိုလျှင်, ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်ကိုဝယ်. သငျသညျအမြိုးမြိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာအွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖောင်းစေခြင်းငှါသော်လည်း တစ်ဦးကရထား Save.
Calais လန်ဒန် Eurostar ရထား
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Bruges
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှဟိဂ်
ဘာလင်မှလန်ဒန် Eurostar ရထား
Check-In မှာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စိန့်-Pancras ဘူတာ
သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအတန်းအစားပေါ်မူတည်ပြီး, သငျသညျအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ထွက်ခွာဘူတာရုံမှာရောက်လာချင်ပါလိမ့်မယ် 40-60 ရထားလန်ဒန်ကနေပဲရစ်အထိမထွက်ခင်မိနစ်အနည်းငယ်မှာ. သငျသညျလန်ဒန်ကနေParisပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားစီးပွားရေးပရီးမီးယားလိဂ်လက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပါတယ်, သင်သီးသန့် Lounge မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, များစွာသောစျေးဆိုင်များနှင့် peruse မှသင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်အချို့မှာပါဝင်သည်:
AMT ကော်ဖီ – အဆိုပါဘူတာအတွင်းနှစ်ခုတည်နေရာနှင့်အတူတစ်ဦးကကော်ဖီဆိုင်. ဒါဟာလက်ဖြစ်အချိုရည်နှင့်အပြည့်အဝဆွေးခွက်ကမ်းလှမ်း, သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြုံးစေသည်.
အဆိုပါ Barrel Vault – တစ်ဦးကအစဉ်အလာအင်္ဂလိပ်အရက်ဆိုင်ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုယာဉ်ဘီယာ, အစစ်အမှန် ale, gins, ကော်ဖီ, နှင့်ဝိညာဉ်များ. ဒါဟာအစနံနက်စာနှင့်ဂန္အရက်ဆိုင်ခတာဝန်ထမ်းဆောင်.
Chop'd – တစ်ဦးကကျန်းမာရေး-အာရုံစူးစိုက်စားသောက်ဆိုင်, Chop'd ဟင်းချိုအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း, သုပ်, ခရီးသွားများအတွက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့အစွပ်ပြုတ်နှင့်ကိစ္စ္စ.
သင်သာတစ်နေ့ခရီးစဉ်အောင်နေသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်သည်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတှကျဘူတာရုံမှာလည်းလက်ဝဲ-အိတ်နေရာများတွင်တပ်ဆင်ထား. ဤရွေ့ကားသိုလှောင်မှု options များစျေးပေါဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏတိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှုနာရီပူဇော်.
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Cologne
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Ghent
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Middelburg
Leiden လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
အဆိုပါ Eurostar ရထား onboard
onboard ပြီးတာနဲ့, ပဲရစ်မှလန်ဒန်ကနေစုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်2နာရီနှင့် 16 မိနစ်များ. သင့်ရဲ့ Pre-ထွက်ခွာဆိုက်ရောက်နှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, သင်၏စုစုပေါင်းခရီးအချိန်န်းကျင်ရှိလိမ့်မည်3နာရီ.
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အခမဲ့ Wi-Fi onboard ရှိပါတယ်, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်အီးမေးလ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်. သင့်ရဲ့လက်မှတ်ပေါ် မူတည်., သငျသညျကိုလညျးထမင်းစားခန်းနည်းပြဦးနိုင်ပါတယ်, သငျသညျအစာကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာ, အချိုရည်များနှင့်မုန်. သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလေယာဉ်ထဲမှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်, အစားအစာသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုတိုက်ရိုက်ယူဆောင်ပါလိမ့်မည်.
ဒူစယ်လ်ဒေါ့ဖ်လန်ဒန် Eurostar ရထား
Essen ကိုလန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှမြ
Leuven လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
ပဲရစ် Gare ဒူ Nord မီးရထားဘူတာရုံမှာဆိုက်ရောက်
စိန့်ကနေရထား. Pancras ဘူတာရုံပဲရစ်အလယ်၌ရောက်ရှိမည်, အဆိုပါ Gare du Nord ဘူတာရုံမှာ. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘူတာရုံသူ့ဟာသူအတွက်အနုပညာအလုပ်ဖြစ်ပါသည်, ယင်း၏မျက်နှာစာနှစ်လယ်ပိုင်း 1800 ရဲ့ built-in များနှင့်လှပစွာထိန်းသိမ်းထားနှင့်အတူ. မြို့သူမြို့သားသွားရောက်ထုတ်ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထိုအဆောက်အဦကိုခံစားဖို့အခိုက်အယူပါ.
သငျသညျတခုဆိုက်ရောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗြိတိန်မထွက်ခွာမီသင်သည်ပြီးသား check-in ပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ်ကြောင့်,. ဤသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လည်းလက်ရှိမှန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံအီးယူထွက်ခွာနှင့်အတူဤဖြစ်စဉ်များသိသိသာသာအပြောင်းအလဲများကိုခံယူမညျဖွစျကွောငျးဖွယ်ရှိသည်သော်လည်း.
သငျသညျရောက်လာပြီးတာနဲ့, သငျသညျထိုမွို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်, စားစရာဘို့ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်အတူ, စျေးဆိုင်များနှင့်အချိုရည်. သင်ဘူတာစွန့်ခွာဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သင်အနီးအနား Brasserie Terminus Nord တွေ့ပါလိမ့်မယ်, ရထားဘူတာမှကားလမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ရိုက်ဖြတ်ပြီးကျော်ကြားသော Art Nouveau စတိုင်စားသောက်ဆိုင်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သငျသညျဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာနှင့်အချိုရည်အချို့ကိုတွေ့ရှိရန်ရိုးရှင်းစွာဆိုဦးတည်လှည့်လည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ရထားဘူတာရုံသူ့ဟာသူအတွင်းမှာပဲ, သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ Metro နှင့် RER ရထား, အဖြစ်ပြင်သစ်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာရထား. ဒေသခံသံလမ်းနှင့် Metro ရထားလုံးကိုပြင်သစ်မြို့တော်တစ်လျှောက်လုံးသင်ယူနိုင်ပါသည်, များစွာမှ ပြတိုက်, ပြခန်း, နှင့်ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှုအတွင်း.
သငျသညျနံနကျစောစောရောက်ရှိလာနှငျ့သငျစစျဆေး-in ကိုရှေ့၌သင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားရောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်လည်းအခွင့်ကောင်းယူမယ့်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်နိုင်သည် left-အိတ် options များ ရထားဘူတာရုံအတွင်းရရှိနိုင်. ဤရွေ့ကားသိုလှောင်ရုံအတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့နေ့ရက်ကာလကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး option ကိုဖွစျစနေို.
Eurostar တိုက်ရိုက်ရထားလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်, သငျသညျအကြိုးစီးပှားကိုနိုင်နေ2အဘို့ 1 သူတို့အားပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းအများအပြားဝင်ရောက်ခွင့်, ရာသငျသညျဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကိုကယျတငျနိုငျ.
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Frankfurt
မြူးနစ်လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Moutiers
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှမာဆေး
ရထား Times သတင်းစာသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရန်ပဲရစ် Eurostar နှင့်အတူ
အဆိုပါ Eurostar မကြာခဏပြေး, အထိနှင့်အတူ 19 အားလပ်ရက်ပေါ် မူတည်. တစ်နေ့လျှင်ထွက်ခွာခြင်းနှင့် တနင်္ဂနွေ. မှာတစ်နေ့လျှင်ဦးစီးဌာနပထမရထား 05:40 နှင့်စုစုပေါင်းယူ2နာရီနှင့် 37 မိနစ်များ. ဤသည်ကိုမကြာခဏရရှိနိုင်ဈေးအပေါဆုံးလက်မှတ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်, သငျသညျစောစောထဖို့ဆန္ဒရှိနေလျှင်ဒါအချို့ကိုသင်ပိုက်ဆံနဲ့ save အရုဏ်၏ချိုးမှာထွက်ဦးနိုင်ပါတယ်. ဒီအစောပိုင်းထွက်ခွာသွား၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးပဲရစ်၌သင်တို့၏ရောက်ရှိချိန်ဖြစ်ပါတယ် 09:17, အရာကသင်ကိုရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဆိုလှုပ်ရှားမှုများသည်သင်၏အပြည့်အဝနေ့ကရှေ့ဆက်ကြဆိုလိုတယ်.
လမ်းကြောင်းကြိမ်အလုပ်ချိန်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမဟုတ်ရင်များမှာ, သငျသညျရှေးခယျြဖို့ရာကနေ options ကိုများများရသောပေးသည်. မှာညဥ့်ဦးစီးဌာနမှနောက်ဆုံးရထား 18:31 နှင့်ရောက်ရှိ 21:47, သင့်ရဲ့ဟိုတယ်ကို get သို့မဟုတ်ပင်တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်မုန့်ညက်နှင့် Eiffel မျှော်စင်၏ပြောင်လက်လျက်အလင်းအိမ်မှာ peek အဘို့အထွက်ဦးမှအချိန်များများသင်ထွက်ခွာ. ဤရွေ့ကားညအချိန်ရထားအိပ်ပျော်ကားများပါရှိပါတယ်စေခြင်းငှါ, မူသောသင်တို့ခရီးဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီအိပ်ပျော်ရာမိနစ်အနည်းငယ်ဖမ်းပြီးဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းရှိပါတယ်. ထို့အပြင်, တချို့ရထားညဉ့်တစ်လျှောက်လုံးလူကြိုက်များနေရာများအကြားသွားလာစေခြင်းငှါ.
လန်ဒန် Eurostar ရထားသို့ Den Helder
Maastricht ကိုလန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Dijon
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Bonn
လန်ဒန်မဟုတ်သောပါရီသို့ Eurostar ရထားဖြင့်သွားသောအခြားလမ်းကြောင်းများ
ဤဆောင်းပါးတွင်စိန့်အကြားခရီးသွားအပေါ်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်နေစဉ်. Pancras အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘူတာနှင့် Gare ဒူ Nord, အဆိုပါ Eurostar လည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများများစွာလည်ပတ်:
ဘရပ်ဆဲလ် – ရထားတိုင်းကို run 90 မိနစ်2နာရီ. ဒါဟာကိုယ့်ကိုကျော်ကြာ2ဘရပ်ဆဲလ်မီဒီ / Zuid ဘူတာရုံရောက်ရှိဖို့နာရီ.
Calais / Frethun- ရထားလန်ဒန်ကနေအလုပ်ချိန်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို run နှင့်စုစုပေါင်းရထားခရီးသွားမယ့်တစ်နာရီကျော်.
သေးငယ်သော- ရထားလိုင်လီမှနီးပါးအလုပ်ချိန်နာရီစွန့်ခွာ, မြောက်ပိုင်းပြင်သစ်တွင်တည်ရှိသည်. လွှဲပြောင်းဖို့သင်တို့အဘို့ပြင်သစ် TGV ကွန်ယက်တစ်ခုလွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုရှိတယ်. ခရီးအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် 1.5 နာရီ.
Disneyland ပဲရစ် – ရထားတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ကို run ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ကျောင်းကိုအားလပ်ရက်ကာလအတွင်း. လက် Disneyland ဝင်ပေါက်အပြင်ဘက်တွင်ရထားဘူတာရုံ. အဆိုပါခရီးအောက်မှာယူ3နာရီစုစုပေါင်း.
လိုင်ယွန်, Avignon, နှင့် Marseilles- ရထားကနေလုပ်ကိုင်နှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံး 1 သို့5တစ်ပတ်ကိုရက်ပေါင်း, ကရာသီအလိုက်ထိခိုက်သော်လည်းဒီတော့သင်လိုအပ်တဲ့အခါ running ရဲ့သေချာပါစေ. ဒါဟာလိုင်ယွန်အပိုင်း-Dieu ဘူတာရုံမှာရပ် (4.75 နာရီ), Avignon TGV ဘူတာရုံ (6 နာရီ) နှင့်မာဆေးစိန့်ချားလ်စ်ဘူတာရုံ (6.5 နာရီ).
အမ်စတာဒမ်နှင့်ရိုတာဒမ် – စတင်ခဲ့ပြီးသောဝန်ဆောင်မှုအသစ် 2018, သငျသညျရိုးရှင်းစွာအမ်စတာဒမ်မှနေ့စဉ်ရထား၏တဦးတည်းယူ, အရာရော့တာဒမ်အတွက်ရပ်တန့်တို့ပါဝင်သည်. လုံးဝခရီးအချိန်အကြောင်း4နာရီ.
ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောခရီးတစ်ထောက်နားအသုံးချဖို့နှင့်လိုင်လီတွင်တည်ရှိပြီးယင်းဘူတာခြိနျ မှစ. ဆက်လက်အားဖြင့်ဥရောပအတွင်းကအခြားနေရာများသို့ရောက်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့, ဘရပ်ဆဲလ်, နှင့်ပဲရစ်. ရထားလက်မှတ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တယ် သာတစ်ခုတည်းခရီးစဉ်လိုအပ်ပါတယ်.
အလားတူပင်, သငျသညျတခြားနေရာဗြိတိန်မှာနေတဲ့လန်ဒန်ခရီးသွားနေလျှင်, သငျသညျမြားကိုလညျး Ebbsfleet အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစခန်းများသို့မဟုတ် Ashford အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘူတာအစားစိန့်မှာသင့်ရဲ့ Eurostar ခရီးကိုစတင်ရွေးချယ်နိုင်သည်. Pancras. ဤသည်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူသူတို့အားအထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်, Ashford ရထားဘူတာရုံမှတစ်ဦးယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင်နှင့်တိုက်ရိုက် access ကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်.
သင့်ရဲ့လန်ဒန်ရန်ပဲရစ်ရထားများအတွက် Save ကိုတစ်ဦးကရထားနှင့်အတူစာအုပ်လက်မှတ်တွေ
လူအပေါင်းတို့၏ရန်စာအုပ်လက်မှတ်တွေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုရှာရန် ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာများ, အပါအဝင် ဘယ်လ်ဂျီယံ, အီတလီ, ဆွစ်ဇာလန် ပြီးနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Eurostar နှင့်အတူလန်ဒန်ပဲရစ်ရထားအပါအဝင်). ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ပိုက်ဆံကယ်တင် အားလုံးလက်မှတ်တွေပေါ်နှင့်မျှမတို့ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများပါဝင်သည်. သငျသညျလစာပေးရန်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူရန်တို့အတွက်ကျနော်တို့လွယ်ကူပါတယ်လုပ်, ခရက်ဒစ်ကဒ်အပါအဝင်, Giropay, အကောင်းဆုံးကတော့အများအပြားကပို.
ဒါကြောင့်, ခရီးသွားလာမှုအတွက်သမျှသင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်, သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေရှိမရှိသို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူ, ရှာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အပေါ်ရထားလက်မှတ်တွေတစ်ဦးရထား, သောနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းများကမ်းလှမ်း, အာမခံ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / nl သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / pl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#garedunord #stpancras Eurostar လန်ဒန် ရထားခရီးသွား travelfrance travelparis uktravel